Myanmar Small Businesses Development: September 2012
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း
စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဖွဲ့ (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development)က ဖွံ့ဖြိုးးတိုးတက်မှု၏ အခြေခံအကြောင်းရင်းများကို ဆန်းစစ်ရာတွင် တွေ့ရှိချက်များအရ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ အသွင်ကူးပြောင်းစနိုင်ငံများ (transition economies)၏ ဖွံ့ဖြိုးးတိုးတက်မှုနှုံးသည် အောက်ဖေါ်ပြပါ အချက်များပေါ်တွင် အဓိက မူတည်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု တို့မှတဆင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးဖြစ်စဉ် (Global Economy)တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှု၊
တည်တံ့မျှတသည့်သည့် အစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာရေး (sustainable government finances)နှင့် ငွေကြေးဖေါင်းပွမှု၊ ငွေကြေးကြုံ့မှုတို့မှ ကင်းဝေးသည့် ခိုင်မာသည့် ငွေကြေး (sound money)ကို ထိမ်းသိမ်းထားနိုင်မှု၊
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များ (contracts)ကို မချိုးဖေါက်စေရန် ကာကွယ်ပေးပြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုကို ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးသော တရားဥပဒေစိုးမိုးသည့် အစဉ်အလာ၊ပါတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတရပ် (institutional environment) ဖန်တီးပေးနိုင်မှု
လက်ရှိစီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အရှိန်ရလာပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးဖြစ်စဉ်တွင် ပိုမိုဝင်ဆန့်လာသည်နှင့်အမျှ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာမည့် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများမှ တဆင့် ရရှိလာနို်င်မည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားနိုင်ရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးသည့် လူ့ဘောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတရပ် ဖန်တီးနိုင်ရေးဆိုသည့် အဓိကစိန်ခေါ်မှုကြီးများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပြဿနာများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မပြည့်ဝမှုများ၊ အကန့်အသတ်ရှိနေမှုများကို အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ပူးပေါင်း၍ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိပါက နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလားအလာကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ အသွင်ကူးပြောင်းစ၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ (transition and developing countries)တွင် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (SMEs)သည် နိုင်ငံအတွင်းရှိ လုပ်ငန်းစုစုပေါင်း၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုံးကျော်ရှိသဖြင့် အလုပ်အကိုင်ဖန်တည်းမှုနှင့် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပကုန်သွယ်မှုတို့တွင် အလွန်အရေးပါသည့်လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ပြန်ထားသော မူဝါဒဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းတစောင် (World Bank Policy Research Working Paper 5631, 2011)အရ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးမှုကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများနှင့် ယှဉ်၍ အောက်ဖေါ်ပြပါ ကားချပ်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ကားချပ် (၁)။ လုပ်ငန်းအရွယ်အစားအလိုက် အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားမှု
ဇစ်မြစ်။ Small vs. Young Firms across the World: Contribution to Employment, Job Creation and Growth
မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ ဝင်ငွေနိမ့်နိုင်ငံများတွင် ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင် စုစုပေါင်း၏ ၇၃.၅ ရာခိုင်နှုံးမှာ အသေးစားနှင့် အလယ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (အလုပ်သမား ၅ ယောက်မှ ၂၄၉ ယောက်)များတွင် လုပ်ကိုင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အလုပ်သမား ၅ ယောက်အောက်ခန့်ထားသော အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်းများကိုပါ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါက ဤရာခိုင်နှုံးထက်ပို၍ပင် များမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှ တိုင်းပြည်ထုတ်ကုန်၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုံးကျော်မှာ အသေးစားနှင့် အလယ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ထုတ်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့အတွက် အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ ယှဉ်ပြိုင်နှိုင်စွမ်းရှိမှုကို တိုးတက်လာအောင် ဖန်တီးပေးခြင်းသည် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု (Economic and Social Development) နှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျှော့ချရေး (Poverty Reduction) ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် အရေးကြီးသည့် မူဝါဒတရပ်ဖြစ်သည်ဟု အသိအမှတ်ပြုလာကြပါသည်။
ယခင်ဆောင်းပါးတခုတွင် စာရေးသူဖေါ်ပြခဲ့သကဲ့သို့ စီးပွာရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများက မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသေးစား နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (SMEs) များအတွက် အခွင့်အလန်းများသာမက စိန်ခေါ်မှုအသစ်များ ကို ဆောင်ကျဉ်းလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဖွဲ့ (OECD)၏ သုတေသနစာတမ်းတစောင်၏ အဆိုအရ အသွင်ကူးပြောင်းစ၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစု အနေဖြင့် စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှ ရရှိလာမည့် အခွင့်အလမ်း အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၊ ဈေးချိုသောပြည်ပသွင်းကုန် များနှင့် ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်လာရသည့် အခြေအနေနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်ဟု ဆိုပါသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများနှင့်ယှဉ်ပါက အရွယ်အစားသေးငယ်သဖြင့် အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းထူထောင်လည်ပါတ်ရန် လိုအပ်သောဘဏ္ဍာငွေ မလုံလောက်မှု၊ လုပ်ငန်းစတင်ထူထောင်ရန်မှတ်ပုံတင်ရာတွင် ခက်ခဲမှု၊ လုပ်ငန်းလည်ပါတ် ချဲ့ထွင်ရန်မလွယ်ကူမှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးစသည့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ညံ့ဖျင်းမှု၊ ထိရောက်ကောင်းမွန်သော အထောက်အကူပြု အဖွဲ့အစည်း ပါတ်ဝန်းကျင်ကင်းမဲ့မှု စသည့် အကန့်အသတ်များဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ ဤအခက်အခဲ အကန့်အသတ်များကို ဖယ်ရှားရန်မှာ လွယ်ကူသည့် အလုပ်မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံအဆင့်၊ ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်၊ အောက်ခြေအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတ်ဝန်းကျင်ကောင်း တခုကို ပံ့ပိုးထူထောင်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၃ နိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခု စတင်ရန်လိုအပ်ချက်များကို သုတေသနပြုလုပ်ထားပြီး၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခု လုပ်ကိုင်ရန်လွယ်ကူမှု အဆင့်ကို နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်လေ့ ရှိပါသည်။ ဒေသတွင်းနိုင်ငံအချို့တွင် လုပ်ငန်းစတင် ထူထောင်ရန်လိုအပ်ချက်များကို အောက်ပါ ဇယားတွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဆိုပါစာရင်းတွင် မပါဝင်သေးသော်လည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလတွင် ထုတ်ပြန်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာ (IMF Article IV Consultation on Myanmar) အရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုစတင်ရန် စားရိတ်အကြီးဆုံးနိုင်ငံများထဲတွင် ပါဝင်နေသည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ ဖိလစ်ပိုင်အစရှိသည့် နိုင်ငံများမှ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်း၊ မလေးရှား အစရှိသည့်နိုင်ငံများမှ လုပ်ငန်းများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။
ဇယား (၁) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရန်လွယ်ကူမှုအဆင့် (၂၀၁၂)
ဇစ်မြစ်။ Doing Business: Measuring Business Regulation (World Bank)
ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် ပြုလုပ်ထားသော သုတေသနဆန်းစစ်ချက်များအရ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆန်စင်ရာကျည်ပွေ့လိုက်ဆောင်ရွက်နေ၍မရဘဲ နယ်ပယ်ကဏ္ဍစုံ လွှမ်းခြုံပါဝင်သော မဟာဗျူဟာတရပ်ချမှတ်ရန် လိုအပ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အဓိက လိုအပ်ချက်များမှာ
အစိုးရတရပ်အနေဖြင့် ကောင်းမွန်ခိုင်မာသော စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု
ပွင့်လင်းမြင်သာ ရိုးရှင်းသော ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဘောင်အတွင်းမှတဆင့် လုပ်ငန်းရှင်များအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို သွက်လက်၊ ချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေး လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှု
ကောင်းမွန်သွက်လက်သော အုပ်ချုပ်မှုစံနစ် (good governance)
လုပ်ငန်းထူထောင်ရန်နှင့်လည်ပါတ်ရန် လိုအပ်သော ရင်းနှီးငွေများ လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ရရှိနိုင်မှု (စာရေးသူ၏ သုတေသနစာတမ်းတစောင်(Chit, 2012) မှာ တွေ့ရှိချက်များအရလည်း ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရသည့် လုပ်ငန်းများအနေနှင့် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း မရှိသည့် ပြဿနာနှင့်ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါသည်။)
ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထောက်ကူပေးနိုင်သော ပညာရေးစံနစ် (supportive education)
ကျန်းမာဖြတ်လပ်ပြီး ကျွမ်းကျင်သော လုပ်သားအင်အားထု
စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်နှင့် ပြည့်စုံသည့် ဌာနဆိုင်ရာ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ (capable public and private institutions)
အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစံနစ်များ (operating practices)နှင့် စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာ (business strategies)များချမှတ်နိုင်မှု
အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများနှင့် ဆက်စပ်ပေးနိုင်မှု တို့ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ အသွင်ကူးပြောင်းစ၊ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအနေဖြင့် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမဟာဗျူဟာကို သီးခြားဆောင်ရွက်၍ မရဘဲ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မဟာဗျူဟာ၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျှော့ချရေး မဟာဗျူဟာများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
(နောက်ဆောင်းပါးတွင် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများက အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မည်သို့ အထောက်အကူပေးနေသည်ကို တင်ပြပါမည်။)
Ayyagari, M., Demirguc-Kunt, A. and Maksimovic, V. (2011) Small vs. Young Firms across the World Contribution to Employment, Job Creation, and Growth, Policy Research Working Paper 5631, The World Bank. Available at:http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/04/11/000158349_20110411130747/Rendered/PDF/WPS5631.pdf
Chit, M, (2012) ‘SMEs and Exports: An Empirical Analysis of SMEs in Developing and Emerging Economies’, Management Development Journal of Singapore (Forthcoming)
IMF (2012) Myanmar: Staff Report for the 2011 Article IV Consultation, IMF Country Report No. 12/104, International Monetary Fund: Washington, D.C.
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း by မြင့်မိုးချစ် is licensed underaCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Posted by Myint Moe Chit at 9/09/2012 05:59:00 pm No comments:
With My PhD Supervisors
သယံဇာတကျိမ်စာကို ထိမ်းကြောင်းပေးမည့် စည်းမျဉ်းဥပဒေ
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ယှဉ်ပြိုင်နှိုင်စွမ်း၊ စီးပွားရ...